Maamul u-Sameynta Jubaland: DF iyo JUBBALAND yaa Gar leh?*Akhri oo u Daadag Xaqiiqda* | Saadaal Media	Wednesday, March 12th, 2014	Home
Maamul u-Sameynta Jubaland: DF iyo JUBBALAND yaa Gar leh?*Akhri oo u Daadag Xaqiiqda*
Nov 26, 2012 - 28 Jawaabood	Share
Maalmahan waxaa aloosnaa khilaaf la sheegay inuu u dhexeeyo madaxda dawladda federaalka (DF) ah ee cusub iyo guddiga ku hawlan dhismaha dawlad goboleedka Jubaland (JL). In kastoo khilaafkan aan si rasmi ah loo shaacinin, haddana waxaa muuqata in uu jiro khilaaf ka dhexeeya labada dhinac. Islamarkaasna waxaa muuqata inaan wax xal ah laga gaadhin khilaafkaas.
Runtii waxaad moodaa in khilaafka looga aamusay sidii looga aamusi jiray khaladaadkii hore ee dalka ka dhacay, ee ilaa hadda raadkoodii uu sii jiro amaba caqab ku ah horumarka Soomaalida. Tusaale ahaan, xornimadii kadib gobolada waqooyi galbeed waxbey tabanayeen. Lama xallinin ee waa laga aamusey, waxayna keentay cabashadoodii inay go’aan, walina wey taagantahay mushkiladii laga aamusey. Dagaalkii jabhadaha iyo kacaankii ee isu badalay “dagaalka sokeeye” ee galaaftay dawladii dhexe lagama hadlin, la ismana waydiinin sababta dagaalku isugu badalay “dagaal sokeeye”, waa laga aamusanyahay. Dagaaladii dhex maray Caydiid iyo Cali Mahdi lagama hadlin ee waa laga aamusey, saameyntoodiina wali way taagantahay. Dagaaladii Caydiid iyo RRA lagama hadlin ee waa laga aamusey. Dagaalka beelaha Sacad iyo Saleebaan maxay u soo noqnoqdaan wali waa arin taagan oon xal laga gaadhin. Dagaalkii dhex maray C/laahi Yusuf (Allaha u naxariisto) iyo ururkii Al-Itixaadka waa laga aamusey. Maxaakiimta oo Sheekh Shariif hogaaminayay maxay dagaalka ula galeen Itoobiya, hadana ay ula heshiiyeen lagama hadlin ee waa laga aamusay. Dabcan tusaalooyinku intaas way ka badanyihiin oo ma soo koobi karno, hase ahaatee, waxaa caado noqotay in mushkilo kasta loo daayo “wakhtiga”, lagana aamuso, laakiin waxay u muuqataa in uusan wakhtigu fahmin inta badan mushkilada Soomaalida ama uuba xallin kari waayay. Haddaba sida looga aamusey xasaradihii dalka ka dhacay oo dhan, si la mid ah ayaa looga aamusay khilaafka ka taagan maamul u sameynta JL.
Way dhici kartaa in xal laga gaadho maalin uun, laakiin waxaa darsi laga faa’iidi karo ah dulqaadka labada dhinac ay u leeyihiin wada hadalka mudada intaas le’eg socday. Sidoo kale, waxay muujinaysaa garta mudadaas socotay inay labada dhinac doonayaan inay xal waara ka gaadhaan arintaas. Inaguna haddaan Soomaali nahay waxaan u baahan-nahay sidaas si la mid ah in wada-hadalku uusan istaagin, islamarkaasna, arin kasta wada-hadalkeedu socdo ilaa xal laga gaadho.
Guddiga Maamul u-Sameynta Jubaland Maxay ku gar-leeyihiin? Arinta in daahirka guud laga fiiriyo oo kaliya ku xallismi meyso ee waa lagama maarmaan in duruufaha ku xeeran arinta JL iyo taariikhda dhacdooyinka gayiga Soomaalida loo laabto. Haddii arinta maamul u sameynta JL laga fiiriyo dhinacyada kala duwan ee ay leedahay waxay ku doodayaan xujooyinka soo socda.
Hawsha maamul u sameynta JL waxay jirtay madaxda DF oon jirin. Sida aan la socono sanad ka badan ayay socotaa hawsha maamul u sameynta JL, waa arinta abuurtay in hadda madaxda DF ay fahmi waayaan. Haddii warkooda la raacana waxay noqoneysaa “ciyaarta kow laga soo bilaabo” maadaama aan cusbahay. Guddiga ku hawlan maamulka JL waxay ku doodayaan in kharash badan baxay, hawshuna inteeda badan dhammaatay. Islamarkaasna aysan haynin madaxda DF xujo adag oo shirka dib loogu celiyo. Haddaba, guddiga ayaa ka xujo adag madaxda DF, markii loo eego qodobkan.
Madaxda DF ilaa hadda wax badiil ah ama xal kale lagama hayo. Haddii madaxda DF ay keeni lahaayeen xal kale ma dheceen khilaafkan maanta jira. Tusaale ahaan haddii madaxda DF ay balan qaadi lahaayeen: ciidanka ilaalinaya ergooyinka iyo hawlaha shirka, iyo inay bixiyaan lacagta ku baxaysa shirka inta uu socdo waxbay ahaan lahayd, xujadooduna way xoog badnaan lahayd. Laakiin labadaas midna DF ma awooddo xilligan, saas darteed ayaa keenaysa in laga gar helo DF. Haddaba, marka loo eego xujada ay cuskanayaan, kooxaha ku hawlan maamulka JL ayaa ka maangalsan tan DF.
Sababta Kenya loo diiday, Itoobiyana looga aamusey ma cadda. Madaxda DF si caqli gal ah uma cadeynin sababta loo diidanyahay Kenya, waayo waxaa la sheegay in Kenya ay iskeed ama danaheeda ay usoo gashay dalka ama Kismayo. Waxaase ka hoos baxday madaxda DF in madaxweynuhu uu tagay Baydhabo iyo Beleweyne, islamarkaasna ay ku soo dhaweeyeen ciidanka Itoobiya oon ka tirsaneyn AMISOM. Su’aashu waxay tahay maxay Itoobiya usoo gashay dalka? Danaha Soomaaliyeed miyaa? Madaxweynahu muxuu ku diidi karaa ciidanka Kenya oo AMISOM ka tirsan, halka uu saraakiisha ciidanka Itoobiyana kula kulmay xeryihii ciidankii qaranka iyagoon ka tirsaneyn AMISOM, kuna soo galin dalka ogolaansho UN, IGADD ama ogolaansho baarlamaan Soomaaliyeed midna. Waxaa intaas dheer dhowr sano unbaa ka soo wareegtay markii Madaxweyne Xassan Sheekh uu ka mid ahaa dadkii taageerayay in ciidanka Itoobiya lala dagaalamo (muqaawamadii). Sidoo kale, markii ay madaxdii maxaakimta iyo taageerayaashoodii (oo Xasan Sheekh uu ka mid ahaa) ay ka carareen ciidanka Itoobiya waxay magan galeen Kenya. Taasoo ka dhigan inaan Kenya loo qabin cadawnimo hore. Saas darteed, xujada ah in Kenya ay dalka faragalin ku hayso, Itoobiyana aysan ku haynin ma aha maangal ah, haddii kale, arintu waxay noqoneysaa “oohintu orgiga ka weyn” oo dulucdeedu tahay “mushkiladu ma aha taangiga dalka soo galay ee waa cidda –beesha- uu sidu”, saas darteed markii taangiga Itoobiya uu siday C/laahi Yusuf waxaa la iclaamiyay “jihaad” hadana Itoobiyanku waxay sidaan……..!!. Saas darteed, xujada ah “Kenya ayaa faragalin ku haysa Soomaaliya” ma aha wax maangal ah, waxaana garta iska leh guddiga maamul u sameynta JL.
Xujada ah “marka hore deegaanka halla wada xoreeyo” maangal miyaa? Waxaa madaxda DF ka soo yeedhay inay haboontahay in marka hore la wada xoreeyo deegaanka JL, kadibna la dhiso maamulka JL, hase ahaatee aragtidaasu ma cuskana xujo caqki gal ah. Sababtu way fududahay. Madaxda DF oo uu ugu horreeyo madaxweyne Xassan Sheekh ma aysan sugin inta dalka laga wada xoreynayo, waxayna isu taageen madaxtinimada dalka iyadoo xattaa gobolka Banaadir uusan gacanta DF ku wada jirin. Maalin dhaweyd markuu madaxweynuhu ka hadlayay arinta JL ayuu sheegay inay muhiim tahay in horta la xoreeyo deegaanada JL oo dhan, kadibna maamulka la dhiso. Laakiin su’aasha markiiba maankeyga kusoo duxday waxay ahayd: oo madaxweynuhu muxuu u sugi waayay inta dalka laga wada xoreynayo, si uu dalkoo xor ah isugu soo taago doorashada? Madaxda DF waa looga gar leeyahay arintaas, mana hayaan xujo la aqbali karo.
Xujada ah “maamul dibada lagu soo dhisay sharci ma aha” ma garbaa? Haddaan taariikhda dib u jaleecno, dawladihii KMG ahaa oo dhan waxaa lagu soo dhisay dalka dibadiisa, sharcinimadeedana waxba lagama sheegin. Haddaba, maamul dibada lagusoo dhisay ma aha mid ku cusub dalka ee waa qaab Soomaalidu kusoo gaadhay halka ay maanta joogto, ayna ku dhisatay dawladda federaalka ah. Tan kale, arinta sababtay in maamul lagu soo dhiso dalka dibadiisa waa isla tii keentay in dawladihii KMG ahaa lagu soo dhiso dibadda. Dawlad la dhiso waxay u baahantahay ciidan iyo dhaqaale, midna Soomaalidu ma heli karo ilaa ay cagaheeda ku istaagto. Haddaba, xujadan waa looga gar leeyahay madaxda DF, mana hayaan dood lagu raaci karo.
Ugu danbeyntii markaan haddaan lafagurno doodaha labada dhinac, waxaa inoo cad in madaxda DF laga garleeyahay oo aysan haynin wax u cuntami kara shacabka ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. Taasi waa tan keentay in shacabku si buuxda u taageeraan guddiga ku hawlan maamul u sameynta JL oo ay ka horyimaadaan madaxda DF. Haddaba waxaan filayaa inay haboontahay madaxda DF ay u tanaasulaan shacabka, ayna dhiirigaliyaan maamuladda dadku sameysanayaan. Waxaa mudan in la xusuusnaado in Soomaaliya aysan wali gaadhin heerkii ay si buuxda isu aamini lahayd oo la dhihi lahaa madaxda DF waxay si buuxda u matalaan qaranka Soomaaliyeed. Waxaa wali jira dareen ah in madaxda DF ay kala matalaan qabiilada ay ka soo jeedaan. Haddaba, hawsha ugu weyn ee ay tahay inay ka shaqeyso DF sidau u abuuri lahayd is-aaminaad la dhexdhigo qabaa’ilka Soomaaliyeed ee muddo kala irdheysan,
W/Q: C/llahi Adan Ciid, email: aadanciid114@gmail.com
Fadlan Fikir kaaga Ha'ahaado Mid Bulshada Waxtar u leh Fikradaha Akhristayaasha (28)
Gaashaan says:	November 26, 2012 at 2:05 pm	Waa taxliil (analysis) fiican waadna mahadsantahay walaalkiis. Laakiin yey hal arin kaa hoos bixin. Dadka dega Goboladan la leeyahay Jubooyin waxay kamid ahaayeen dadkii is cunay oo ay dhex mareen dagaalo qaraar oo lagu hoobtay taasna waxay meesha ka saaraysaa in ayaga laftoodu ku heshiin karaan maamul oo dhisan karaan waayo lama dawayn dagaalkii iyo dhiigii ay iska daadiyeen. Mida 2aad Kenya waxay wadataa Qabiilo gaara oo ayadu rabto inay danteeda gaarkaa ku gaarto oo Qabiilada kale ka kor marinayso taasna waxay keeni kartaa ama keeni doontaa in mar labaad dadka Goboladu islaayaan oo dhiig dambe daad shaan.Sidaa darteed aniga garta ah Dawlada meesha ha laga saaro oo hala fasaxo arinta Kenya dabada ka riixayso sax ilama ahan. Dawladu hadii ay saxantahay iyo hadii ay khaldantahayba ayadaa Dawlad Soomaaliyeed ah Qabiilada dega Jubooyina waa ku jiraan Dawlada marka ayadaa ku gar leh inay Dalka Maamul u dhisto ama looga dambeeyo.
Reply »	Majeerteen yare says:	November 26, 2012 at 7:54 pm	Gaashaan marka hore salaan marka dambe xageed ku ogtahay mama Dahabo
Reply »	Ali says:	November 27, 2012 at 12:25 am	Walaalka waqtiga galiyay qormada waa mahadsan yahay.aniga waan ka aragti duwanahay mudane gaashaan sababtoo ah dowlada aad sheegaysid tabar malahan lamana aysan imaan kalsooni ay masiirkooda ugu aamini Karaan dadka gobaladaan laga hadlayo degen.tan xigta qorshahaan labadii sano ee ugu danbeeyay wuu socday oo waaba ka horeeyay dowladaan hadda jirta
Reply »	Hassan says:	November 27, 2012 at 2:16 am	Viva Jubbaland.Xassan Maxamuud Culusoow wasiirdii ayuu soo dhamaystiri layahay marka maxaa jubbaland laga weydiin,tii Qaranka ayuuba ku dhaliilan yahay oo waaba ninkaan awoodihii dalka isku darsaday oo biitooniyaasha Inuu magacaabo rabo
Reply »	qaraaye says:	November 27, 2012 at 4:14 am	tuugo isbiirsatay oo caqli foorara somaliyay walee ama walaalo dalkooda iyo dadkooda meel uga soo wada jeesto ayaan ahaanaynaa ama tariiqdu waxay quri somali ayaa daganaanjirtay wadanka ina layiraahdo sida rid indian ka mareekanka wax isku fala tuulo dowlad waa utaqaanaan qabiilna qaran
Reply »	Hassan says:	November 27, 2012 at 10:22 am	Somaaliddu na taqan sida khilaafaadka loo xalilo waana sababta keentay in markasta colaadaha iyo xasaradaha oga oogan yihiin dhamaan degaanada ay geeska Afrika ka dagaan
Reply »	Fowsiya says:	November 27, 2012 at 11:57 am	Aad baan ugu mahadcelinayaa qoraha maqaalka oo aad moodo inuu yahay mid dhamaystiran oo si fiican looga baaraan dagay.verdict ayaanba u bogay iyo soo bandhigin qodobada doodu ka taagan tahay…..garta waa riday qoraha lakiin waxay ahayd anaga akhristayaasha inuu nala sugo
Reply »	Mahdi says:	November 27, 2012 at 12:32 pm	Guul guul guul guul guuul guul Somali Republic
Reply »	Wadani will majeerten from putland garoowe says:	November 27, 2012 at 12:37 pm	Xasan cul lusoo waxaa u yeeray odayasha beesha hawiye ooka soo jeedo juba /land state/ waxuuna la iman waji kale oo cusub hala ogaado darooot
Reply »	Jubbalander says:	November 27, 2012 at 12:56 pm	Soomaaliya ha is raacdo,Xassan Culusoow iyo xulafadiisu ha dhaceen,Hawiye Action Group maxaa jubboyin iyo gedo ka galay.
Reply »	Reergedo says:	November 27, 2012 at 1:00 pm	Nabad baa naas la nuuga leh,IGAD gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya ciidamadeeda way ku sugan yihiin gobalada kala duwan ee Jubbaland,Marka hadiiba ay iyagii alshabab ka xoraynayaan gobaladaas isku waafaqayn dadka degaankaas inay maamul samaystaan waxay ilatahay in dowlda Soomaaliyeed doorkeedu yahay tageero
Reply »	Sugule says:	November 27, 2012 at 1:01 pm	Viva Jubbalnad ……ka naxow nafta waa
Reply »	Wanaagdoon says:	November 27, 2012 at 1:07 pm	Anigu kan fahmin role ka IGAD ee arrimaha Jubbooyinka ,dhexdhexaad iiguma kuu muuqdo
Reply »	Abshir says:	November 27, 2012 at 1:10 pm	Madaxweynahaan aan xitaa Dastuurkii lagu doortay hareer maray yaan waqti lagu lumin,Reer Jubbalnad haisku tashteen
Reply »	Muumin Magan says:	November 27, 2012 at 1:17 pm	Soomaaliddu na yaqaanan sida loo doodo,inta badan way ku adagtahay inay aqbalaan qof ka aragti duwan taas ayaan u arkaa inay kalifaysa in aan xal laga gaarin mushkIladaha taagan
Reply »	Xuseen says:	November 27, 2012 at 1:44 pm	Waa yaabe gobalada gedo iyo Jubooyinka maxay kaga duwan yihiin Gobalada kale?
Reply »	HabIba says:	November 27, 2012 at 1:48 pm	Well said Mr.Abdullahi
Reply »	Xarago says:	November 27, 2012 at 2:05 pm	Soomaali siyaad barre oo kale ayaa xukumi karo oo karbaash iyo dhibada u qoro.dad bisil ka ahan oo wixii dhexmaro xalili jaro.si fiican ugu fiirso Soomaalida markasta waxaa horboodayo kuwooda ugu khayrka roon,dad kooda wanaagsan wey dib dhigaa tasaana sababta in Status qua lagu sugnaado,wax is badalaayo ka jiraan
Reply »	Sahal says:	November 27, 2012 at 2:41 pm	Allaa idiin maqan reer GEDOW,cdkasta cadow ayay idiin tahay
Reply »	Gaashaan says:	November 28, 2012 at 5:53 am	Qolyaha Kenya Dufacaya, hadana leh Hawiye maxaa ka galey Jubaland waxaan leeyahay Hawiye waa Dad Soomaaliyeed oo walaalihiin ah ee maxaa Adoonta Kenya idinka galey idinka. Mida kale qolyaha eedaynaya Dawlada, hadii Dawladu xuntahay maxaad uga mid tihiin oo wasiiro iyo xil dhibaano ugu leedihiin. Bal ii sheega reerka aan Dawlada ku jirin oo aan Wasiir iyo Xildhibaan ku lahayn. Marka qolyaha ay Juba land madax martay xaalkoodu waxaa weeye aniga waxaygu waa ii gaar oo kaligey ayaa iska leh, adiga waxaagana waan kula leeyahay. oo waxay rabaan inay Xamar ka taliyaan oo Hawiye wasiiro iyo madax u noqdaan dhinaca kalana yiraahdaan reer hebal maxaa Juba land ka galey. Waa caqligii Somaliland iyo Puntland ee fooraray oo kale, Kismaayana waxaa ka socda waa caqligii Ethiopia Soomaali Galbeed ku qaadatay waqti hore Kenyana NFD ku qaadatay. Anigu waxaan idin leeyahay nimanka Suuqyada Gubaya caruurta schoolka dhiganaysana gubaya, dumarkana kufsanaya inaad dufaacdaan waa doqonimo. Hadii kale waxaa run ah “Adoon ninkii Garaacuu u niikiyaa”
Bal doodiina aan maqlo.
Reply »	Maryam nuur says:	November 28, 2012 at 6:55 am	Gashaan inkastoo aad yara xanaaqday haddana qabiil dhan inaad u gaftid waa kugu karti xumo.Kenya sow ma ahan kuwa Alshabaab kaa xoraynayo oo gedo fadhiya.maad hadad kenya diidan tihiin hadasahaan oo dhulkeena hanooga baxdo tiraahdaan.taasi wxay ku cadaynaysaa in cadaawad aad kenya u qabtaan hadad maraxeen tihiin inaysan jirin marka doodaadaan meel ma haysta walaalkis
Reply »	Maxamuud says:	November 28, 2012 at 7:40 am	Gaashaan ilaa hadda noomaadan cadayn wax aad ku eedeynayso Kenya marka laga tago inay qabiil la safantahay.haddii taada la raaco sideed ayaad dadka aad sheegaysid oo dowlada wato ugu horimaan kartaa adigoo qabiil ah?bal su`aashaas iiga jawaab?
Reply »	saadaq Hurre says:	November 28, 2012 at 3:14 pm	Asc Dhamantiin, Qoraaga wa uu ku mahadsanyahay qormada xiisaha badan,
Waxa isweydiin mudan Maxaa Arinta Jubooyinka Sidaas oo dhan ay Ugu weynaatay Xassan Sh Maxamuud, Xitaa Wuxuu ka mashquulay Hawlihiisa Xafiis Isagoo Muhiimad weyn siiyay Arimaha Jubooyinka, Hadii aan aragtideyda ka hadlo ‘ waxaan oran karaa, Somali 1990 kii ayey si cad u kala tagtay oo lais aamini maayo, Arintu wadaninimo ma ahan ee dano kale ayaa jiro,
” Ohintu Orgiga ka weyn” Waa Madaxweyne Dhiiwo Lugaha La galay Oo doonaayo Inuu fuliyo Dano Dadkiisa U khaas ah, Kana Baxay Axdigii Uu dalka u qaaday.
waxan Oran lahaa Dadka Dego gedo iyo jubooyinka Ha gaareen Xal muhiim ah, Qolooyinka wadamada Shisheeye Watana waxaan Oran lahaa Ka waantooba, Oo waad ogtihiin Hadii Meesha Dhiibaato ka dhacdo Ma wanaagsanee,
Madaxda Khaasatan Madaxweynahana waxan Oran, “Ninyahow Ka daa, War hooy war Hooy ka daa, warba nooma haysid ,”
Reply »	Nadiif says:	November 28, 2012 at 12:55 pm	Wa runta maa la sheego,hawiye jubbaland ma doonayo oo khatar ku soo fool leh ayay u arkaan,marka waqti calasow Irirism ayuu wadaa u a ka talaqataa Ismail Omar gelle
Reply »	Canjeex says:	November 28, 2012 at 2:09 pm	Way iska muuqataa inaysan sinaba ku gar lahayn dowlada gaar ahaan madaxweyna oo iila muuqda inuu ku fududaaday arrinta Jubbaland
Reply »	wadaad yare says:	November 28, 2012 at 5:59 pm	Qabiil lasoo heshiiyey shisheeye inuu qeyb dalka ka mid ah iskiis ula wareego,ciidan shisheeyana ku waardiyeeyaan oo yiraahdo waa federaal ma noqoneyso federaale waa arrin kale. Taas haddaadan fahmi karin iney qalad tahey Allaha xaqa na tuso.
Reply »	Jama says:	November 29, 2012 at 3:29 am	Waxaa nasiib darro ah in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo qaba in Gobalada Soomaaliya ka tirsan ay si dda badan ay u maamulaan dowlada ha dariska sida uu qoraha ku doodayo oo uu ugu qiil bixinayo faragalinta dowlada Kenya.Waxan ku oran lahaa haddii Kenyaati faa`iido lee yihiin Waqooyiga Barri eeg
Reply »	Mohanlal says:	January 19, 2013 at 6:26 pm	I must’ve been ogling this ripece (every few days, like clockwork) ever since it was posted and I finally gave it a try today. Let me reiterate the sentiments in all the other comments and say it was amazing! I’ve been living off lentils and various beans for a few months so the change was welcomed by my appetite with open arms.Just a quick question if I make an extremely large batch of this, do you think it’d be as delicious (or close enough) if I were to freeze them in small tupperware and defrost it whenever I want. I think it’d make great lunchbox wraps! I think I may even offer it at the next foodie gathering I attend I know it might be a little hard with Somali food, but more veggie ripeces, please!